Wararka Maanta: Isniin, Apr 2 , 2012-Hay'adda HARO oo dhar iyo kabo ay soo ururiyeen Jaaliyadda Soomalida ee Seattle-Washington u qaybisay Barakacayaal ku nool Muqdisho (SAWIRRO)
Hay'adda HARO oo dhar iyo kabo ay soo ururiyeen Jaaliyadda Soomalida ee Seattle-Washington u qaybisay Barakacayaal ku nool Muqdisho (SAWIRRO) Isniin, Abriil 02, 2012 (HOL) — Hay'adda samafalka ee HARO (Huminaterian African Relief Organization) ayaa gargaar isugu jiray dhar iyo kabo ay soo ururiyeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool Seattle-Washington u qaybisay barakacayaal ku jira laba kaam oo ku yaalla Muqdisho.
Guddoomiyaha ha'yadda HARO, Cali Xaaji Cabdinuur oo HOL la hadlay ayaa sheegay in gargaarkan ay ku keeneen konteenar cabirkiisu yahay afar feet, ayna si simman ugu qaybiyeen 1,250-qoys oo isugu jiray, rag, dumar iyo caruur.
"Maalintii khamiista ahayd 650-qoys oo ku jira kaam lagu magacaabo Baadle ayaan u qaybinnay dhar iyo kabo. Maalintii Axadda ahayd ee shalay waxaan sidoo kale u qaybinnay 600-qoys oo ku jira kaam lagu magacaabo Ashariif gargaar noocan oo kale ah," ayuu yiri Cali Xaaji.
Barakacayaashii loo qaybiyay deeqdan oo isugu jiray haween dhallinyaro ah, kuwo waayeel ah, caruur, rag waaweyn iyo kuwo dhallinyaro ah, iyadoo deeqdan ay ka mid noqonayso deeqo aad u yar oo noocooda oo barakacayaasha Muqdisho loo qaybiyo.
"Dadka dharka iyo kaba soo dhiibay waxay arkeen muuqaallo ku saabsan dhibaatada haysatada dadka Soomaaliyeed barakacayaasha ah, markaas ayayna hay'addan u soo wakiisheen inay dharkan iyo kabahan u qaybiso," ayuu yiri Cali Xaaji oo ka yimid dalka Mareykanka.
Hay'adda HARO ayaa waxay tan iyo sannadkii 2007 ka shaqeynaysay caawinta dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan gobollada dalka qaarkood, sida gobollada, Bay, Bakool, Jubbooyinka, Gedo, Hiiraan, Galguduud iyo Banaadir.
Mas'uuliyiinta ha'yadda ayaa waxay ugu dambeyn sheegeen inay howlaha lagu caawinayo shacabka Soomaaliyeed sii wadayaan, iyagoo ka dalbaday Soomaalida inay iscaawiyaan.Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Onlinemaxuseen@hiiraan.comMuqdisho, Soomaaliya
Isniin, Abriil 02, 2012 (HOL) — Qulqulka qoysas fara badan oo kasoo firxanaya deegaannada u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye oo ay ka taliso Al-shabaab ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho. Turkiga oo Magaalada Muqdisho ka hirgeliyay ceelal-biyoodyo ay Kumannaan qof oo Soomaali ah biyo ka helayaan 4/2/2012 7:33 AM EST